Umgaqo-siseko wase-US kunye neSibhengezo senkululeko ngoku 'banolwimi olubi'
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Umgaqo-siseko wase-US kunye neSibhengezo senkululeko ngoku 'banolwimi olubi'
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuchaneka kokuchaneka kwezopolitiko akusindisi uMgaqo-siseko wase-US, iSibhengezo sokuZimela kunye neBhili yamaLungelo.
I-US National Archives tags Isibhengezo senkululeko kunye noMgaqo-siseko wase-US onelebhile yolumkiso ngeelwimi
Amaxwebhu embali ngoku athathwa njenge "anokuba nomxholo onokuba yingozi".
Oovimba abagciniweyo baxelelwa ukuba bazise abasebenzisi malunga nokuziqhelanisa kunye nemvelaphi yaloo "mxholo uyingozi".
Isilumkiso soLwimi oluNobungozi sivele kwiwebhusayithi yeSizwe yoLondolozo lweeNkcukacha zaKudala ezibonisa iinguqulelo ezifundwayo zeSibhengezo senkululeko kunye noMgaqo-siseko. Iilebhile ezilumkisayo 'zolwimi olubi' ziyavela nasemaphepheni kunye nesicatshulwa sezilungiso zokuqala ezilishumi, ezaziwa njengeBhili yamaLungelo.
Ukuqala kokucinga ngabakhenkethi kwiwebhusayithi yeSizwe yoGcino-mpepha njengeprank okanye isiphumo sokuhlaselwa ngabahlaseli, nangona kunjalo yayingeyiyo ihlaya kwaphela.
Ikhonkco kwilebhuel kukhokelela kuVimba weSizwe noLawulo lweeRekhodi (NARA) Isiteyitimenti somxholo "onokuba yingozi," uchazwa njengowubonisa "ubuhlanga, isini, umntu ongakwaziyo ukuthanda iziyolo / ukungaziphathi kakuhle, kunye nezimvo kunye nokuziphatha kwabantu abangaphandle" okanye "ukucalucalula okanye ukungabandakanyi iimbono ezahlukeneyo ngesini, isini, inkolo, nokunye," phakathi kwezinye iikhrayitheriya.
Oovimba abagciniweyo baxelelwa ukuba bazise abasebenzisi malunga nobukho kunye nemvelaphi yaloo "mxholo uyingozi," hlaziya iinkcazo "ngamagama ahloniphekileyo" kwaye wenze "ukuzibophelela kweziko kukwahluka, ubulungisa, ukubandakanywa, kunye nokufikeleleka."
Kwakungacacanga ukuba umGaqo-siseko, isiBhengezo senkululeko kunye neBhili yamaLungelo zibhalwe njengezinobungozi. Emuva ngoJulayi, ngexesha lokufundwa kwesiko kweSibhengezo kwisikhumbuzo sokwamkelwa kwakhe- July 4Ngo-1776 -I-National Public Radio yongeze isimangalo okokuqala, isithi "amagama abhalwe kolu xwebhu umhlaba ngokwahlukileyo" emva "koqhankqalazo lwasehlotyeni oludlulileyo kunye nokubala kwethu kukhuphiswano lwesizwe."
Esi yayisisalathiso kuqhankqalazo lweMicimbi yoBomi obuMnyama eyaqala ngoMeyi 2020, emva kokubhubha kukaGeorge Floyd eMinnesota, ekhawuleze yabangelwa ngamaqela omzabalazo kubandlululo lwamapolisa nakwinkqubo yezentlalo nezopolitiko zase-US. Iidemokhrasi uJoe Biden kunye noKamala Harris baxhasa abaqhankqalazi; ngo-Epreli, emva kokuba ipolisa laseMinneapolis lagwetywa ngokubulala uFloyd, ngoku uMongameli Biden kunye no-Sekela Mongameli u-Harris basincoma isigwebo kwaye bafuna uhlengahlengiso egameni lobulungisa bobuhlanga.
Kuluhlu lwee-tweets ngoJulayi, i-NPR yathi iSibhengezo senkululeko sasiqulathe "iziphene kunye nohanahaniso olungene nzulu," esalatha ikakhulu "kwimbambano yobuhlanga nxamnye nabemi bomthonyama baseMelika" -kucingelwa ukuba ibhekisa kumgca malunga "nabangenangqondo abangamaIndiya abangenanceba" abakholoni bakhalaza malunga nesithsaba saseBritane.
NgoSeptemba 10, 2021 kwi-18: 53
Ndiyadinwa loluhlanga luchasene nobuhlanga kunye nobukrelekrele bacinga ukuba ilizwe lethu linobuhlanga kodwa alikho kwaye bacinga ukuba banokubacalucalula abantu abamhlophe kwaye baphume kuko akulunganga ndigula kwaye ndidiniwe ukubizwa ngobuhlanga ndingenzi nto imbi
UGeorge Petaki uthi:
NgoSeptemba 9, 2021 kwi-17: 11
Ezi ppl ezilila zonke ezi zinto "zimbi" zezona zisebenzisa la magama, iithegi, iikowuti, njalo njalo kubomi babo bemihla ngemihla. I-Leftist liberal morons ethi "boo-hoo" ikhala "ngobuhlanga" kuye wonke umntu okujikelezileyo, kodwa isilele ukujonga esipilini kwaye ibone "abavukeli" bokwenyani abenzakalisa ilizwe lethu kwaye, ngokwembali, "ngabona bantu banobuhlanga". Jonga imbali kwaye ubone ukuba iidemon zibangela iimeko ezoyikisayo e-USA.
NgoSeptemba 8, 2021 kwi-11: 43
Baza kuvuka nini "ii-wokists" kwaye bayeke ukuzama ukwenza kwakhona imbali? Ukuqonda nokwamkelwa “kwezikreqo” zangaphambili yinto nje leyo kwaye inexabiso njengoko siphinda sijonga iimpazamo zexesha elidlulileyo. Nangona kunjalo, akukho sizathu sokucima imbali!